April, 2018 | Otu Di na Nwunye
April 30, 2018 + Airlines, inspirational, Self Improvement, Transportation, Nhazi njem
Oge Mbụ Na-eche: Iji Gbaghaa Egwu Maka Oge Mbụ Oge
Ịtụ egwu maka oge mbụ nwere ike ịbụ egwu, na ịnakwere egwu na ụgbọ elu mbu nwere ike ịda mbà. Nsogbu na egwu nke ụgbọelu nwere ike ịdakwasị mmadụ ọ bụghị nanị ịme njem, kama ọ na - egbochi ohere - ọ ga - eme ka ndụ ghara ịdị. Kedu ka m si jide n'aka? Ebe ọ bụ na m nwere, ma merie, egwu siri ike nke ịgba ụgbọ elu nke ọ bụghị nanị na-achịkwa ndụ m, mana ... GỤKWUO
April 24, 2018 + Di na Nwunye, Europe, France, Ịmụ asụsụ, omenala
Okwu 124 French nke Nkwado
French bụ asụsụ nke, n'agbanyeghị onye ọ na-ekwu okwu, na-eme ka onye na-ege ntị gee ntị, ma ọtụtụ okwu mara mma na French na anyị niile mara. Ọ bụ, nke ọtụtụ ndị chere na ọ bụ, bụrụ ịhụnanya kachasị nke "asụsụ romance". Ọzọkwa ihe na-eme French ka ọ bụrụ asụsụ mara mma n'ezie ka ọ hụ mgbe a na-eji ya eme ihe maka ọdịmma ịhụnanya ma ọ bụ nke dị egwu, nke ... GỤKWUO
April 23, 2018 + Africa, Ozi ndị a, Kenya, Seychelles, Tanzania, Tunisia
Ebe kacha mma na-eme njem nlelị na Africa
E nwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ikwu banyere Afrika. N'ezie, ọ gaghi-aju m anya ma ọ bụrụ na echiche efu bụ echiche mbụ nke ga-abata n'uche gị. Ma ekwela ka o gbochie gị n'eziokwu bụ na ebe a abụghị ihe dị ebube. Africa enweghị ihe ọ bụla. Ọ nwere agba-ịdọrọ ala, mesmerizing ebe ndị dị egwu, anụ ọhịa ndị na-ekpo ọkụ, na ihe ndị ochie ochie nwere ike ... GỤKWUO
April 17, 2018 + Ebe nkiri ebe nkiri, Nyocha, Technology, Transportation, Nhazi njem
April 13, 2018 + inspirational, Outdoors, Njem Njem Ochie
Ọtụtụ mgbe, mgbe ị na-akwadebe echiche na isiokwu maka blog ahụ, anyị na-ahụ foto ma ọ bụ ncheta nke na-ege anyị ntị n'oge na-adịghị anya. N'oge na-adịbeghị anya, ka anyị na-achọ foto nke okike na ntọala dị iche iche, anyị hụrụ foto site na njem njem anyị na Muir Woods National Ncheta, dị nnọọ n'ebe ugwu San Francisco. Nke a bụ na ụbọchị ogologo oge tupu ... GỤKWUO